Però: mpanamory lasa olo-malazan’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2010 10:43 GMT
Noho ny fomba fiteny fiarahabana miavaka nataony tamin'ny 20 desambra 2009 voarakitra an-dahatsary, dia nahasarika olona maro dia maro any Però hijery azy ao amin'ny Youtube ny lehiben'ny sidina (commandant de bord) iray ao amin'ny TACA, César Soto. Nilaza izao teny manaraka izao i Soto rehefa nipetraka minitra vitsivitsy tao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jorge Chávez any Lima ny voromby niainga avy any Santo Domingo, Repoblikana Dominikana:
Tompokolahy sy tompokovavy, tongasoa eto Lima: renivohitra manerantany amin'ny resaka sakafo, firenen'ny ceviche, pisco ary ny pisco sour, tahaka ny lomo saltado, causa limeña, chicha morada, barbecued chicken, anticuchos, suspiro, ary ny maro hafa koa.
Manana trano fisotroana miavaka sy trano fisakafoanana mafilotra ny tanàna. Raha hipetraka eto amin'ny tanànanay ianao dia aza adinoina ny mitsidika ny afovoan-tanàna manantantara misy ny katediraly. Raha hiantsena ianao, mandehana any Miraflores ary raha te-haka aina kely dia azonareo aleha any Gamarra na any Polvos Azules.
Mandehana any LarcoMar manala azy manaraka iny vahilavan'ny torapasika lava iny. Raha te-hanala azy koa na hitady toerana romantika dia any Barranco alaha ary mitsangatsangana any amin'ny Puente de los Suspiros.
Tiako ny mampahatsiahy anareo tsy hamela ny entanareo manokana aty amin'ny voromby tahaka ny solosaina finday, iPods, boky, satroka, tehina, sarondoha, sns. Tsy ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra tavela ato amin'ny voromby izahay. Ankoatra izany dia hisy tombolà ho an'ny mpandeha miaraka aminay amin'ny sidina manaraka.
Tiako ihany koa ny mampahatsiahy anareo rehefa mandalo ny fisavan'ny fadintseranana sy ny fifindramonina ianareo hitsiky sy hieritreritra zavatra tsara. Rehefa mieritreritra zavatra tsara ianareo dia tahaka ny tsara avokoa y zavatra rehetra. Ataovy ho toy ny fanatanjahatena henjana dia henjana ny fandalovana eo amin'ny fadintseranana.
Eo ambany ziogan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jorge Chávez eto Lima avokoa ianareo rehetra.
Farany, tiako ny mampahatsiahy anareo fa fohy loatra ny fiainana: Mamelà faingana, manoroha miadana, ary aoka hianoka am-pitiavana be, aryaza mitsahatra ny mitsiky na dia mafy sahala amin'inona aza ny ieritreretanao azy.
Mety tsy ho araka lanonana nantenaintsika ny fiainana, saingy rehefa ela nanodidina azy isika, dia mba afa-mandihy ihany isika.
Ny mpampiasa YouTube Mellowyn, no naka io lahatsary io sy namoaka azy tao amin'ny kaontiny. Nampitsiky imbetsaka ihany ny mpandeha io lahatsary izay efa nisy nijery nihoatra ny in-110 000 io. 36 taona avy any amin'ny distrikan'i Jesús María any Lima ity lehiben'ny sidina efa nanana mihoatra ny 8000 ora nisidinana ity [es], nefa noho ity lahatsary ity dia manana vondrona mpankasitraka manokana ao amin'ny Facebook izy izay manana mpikambana mihoatra ny 6,400.
Nasongadin'ny mpamaham-bolongana Soto tahaka an-dry Fernando Zambrano, izay namerina tao amin'ny bolongany Ferblogtv [es] ny hafatra fampandrosoana (tonga soa) tsara indrindra nataon'i Soto ka nanoratany fa Lehiben'ny sidina lasa olo-malazan'ny aterineto i Soto [es].
Memorex, izay mamaham-bolongana ao amin'ny El Aprendiz RRPP [es], no nizara ny heviny amin'ny maha-mpianatra amin'ny fifandraisana amin'ny olona azy:
Tsotra tokoa ka sarotra inoana. Tsy nandany ariary akory ny Taca, fiarahabana tonga soa noravaravahana dia efa tsara; izany hoe mbamahay mamorona sy falifaly fotsiny ny mpanamory dia efa tsara ny fijerin'ny olona ny orinasa; ary dia maro ny olona no te-hiara-dia amin'izy ireo indray.
Nasongadin'i [es] Rafael Grández ny fiantraikan'ny tenin'i Soto eo amin'ny fandraisana an'i Taca ho fandraharahana:
Ankehitriny dia i César Soto no miantsoroka ny laza sy ny fitiavan'ny olona ny TACA. Azonao marihina ny vokatra tsara eo amin'ny fampirisihana ny mpiasa mba ho tsara fikarakarana kokoa ny mpandehany. Andao hotadidiana, fa ny voalohany afaka milaza ny tsara na ny ratsy ary afaka misolo tena manome endrika tsara na endrika ratsy ny orinasa dia mpiasa ao aminy ihany.
Na izany aza dia misy ny olona izay misalasala ihany ka mino fa dokambarotra an-dahatsary novolavolain'ny orinasam-pitaterana ihany io lahatsary io. Anisan'izany i Milton Vela avy amin'ny bolongana Café Taipá [es] izay mametraka antony enina ametrahany ny maha-dokambarotra an-dahatsary avy amin'ny Taca azy, ka ao anatiny ny namelan'ny ekipa haka sary nefa tokony tsy hovelomina ny fitaovana elektronika rehefa eny ampanidinana:
Tiako holazaina fotsiny ny maha-dokambarotra io lahatsary io, izay tsy nokasaina hametraka fitsipika faobe, rah amanana raikipohy hampahalaza ny lahatsary ao amin'ny YouTube ry zareo dia te-hiraikitra amin'io fantsona io tokoa izahay, ary tsy dia hisy dikany loatra ity “surprise” ity.
Nofehezin'i Álvaro Alonso Zapatel avy ao amin'ny bolongana El Gato del Hortelano [es] ny heviny nilazany fa na dokambarotra io na tsia dia:
Misy mieritreritra fa lahatsary “dokambarotra” navoakan'ny TACA io, saingy tsy raharahiako izany, tsy fantatry ny olona izany, ary eritreretiko fa mahafinaritra tanteraka ity lahatsary ity.
Na dokambarotra io na tsia dia efa lasa olo-malaza amin'ny aterineto i César Soto noho io lahatsary io.